Ixesha leMarmaray kunye neMephu yeMarmaray | RayHaber
ikhayaETURKEYSithili saseMarmara34 IstanbulIxesha leMarmaray Expedition Amaxesha kunye neMephu yeMarmaray
04 / 08 / 2019 34 Istanbul, THE WORLD, railway, JIKELELE, I-Rail Rail System (HRS), ZOMHLATHI, ETURKEY, VIDEO
Ixesha leMarmaray Expedition Times: Ulwakhiwo lweprojekthi yeMarmaray, eya kuthi idibanise oololiwe kumacala omabini eBosphorus, iyaqhubeka ngokukhawuleza. Imizila yoololiwe iya kuqhagamshelwa enye kwenye ngokudibana kumgaqo kaloliwe phantsi kweBosphorus. Ukukhutshelwa kweMarmaray kunye neentlawulo zeMarmaray ngeendaba ezineenkcukacha malunga nawe. Kwicandelo leTikiti laseMarmaray, ungafumana amaxabiso amatikiti akhoyo.
Umgca uya ngaphantsi komhlaba eKazlıçeşme; izitishi ezintsha ezisezantsi, i-Yenikapı ne-Sirkeci, ziya kudlula ngaphantsi kweBosphorus, kwaye ziya kudibaniswa nesinye isikhululo esingaphantsi komhlaba, u-Üsküdar, kwaye siya kuvuswa eSöğütlüçeşme.
Iprojekti yaseMarmaray kucatshangelwa ukuba ifuthe kwi-bridge ye-bridge yaseBosphorus e-Istanbul. Abantu baya kukhetha ukuwela iBosphorus ngeenqwelo zabo ngokukhawuleza.
Umbuzo omkhulu kwiingcamango zabagibeli abafuna ukuwela i-Bosphorus kunye noMarmaray yiziphi iimeko apho umgca weMarmaray usebenza?
Impendulo yalo mbuzo kulindeleke ukuba ibhengezwe kwakamsinya ngaphambi kokuqala kweprojekthi yaseMarmaray. Iprojekthi yeMarmaray 29 kulindeleke ukuba ivulwe ngo-Oktobha 2013. Xa usenza nayiphi na ingcaciso malunga neeyure zokuhamba ngenqwelomoya zaseMarmaray, iiyure zokusebenza kunye neeyure zokuhamba, siya kukubonelela iiyure zeenqwelo moya zaseMarmaray kwiwebhusayithi yethu:
Marmaray nge Gebze kunye Halkalı Imizuzu ye-105 iya kuba phakathi.
Kuya kuba nemizuzu ye-37 phakathi kwe-Marmaray ne-Bostanci ne-Bakirkoy.
Phakathi kweMarmaray neSöğütlüçeşme kunye neYenikapı iya kuba nemizuzu ye-12.
Phakathi koMarmaray no-Üsküdar kunye ne-Sirkeci kuya kuba yiminithi ye-4.
Iimpawu zeMarmaray ziya kusetyenziswa kwicala elifanayo ukusuka eGeze ukuya eSheğütlü. Ukuhlaziya izithuthi zoomzila kunye nokuyeka kunye nomthombo wamanzi nabantu abasebenzisa iMarmaray Sogutlucesme evela ku-Uskudar, ngoko kuvela kwicala laseYurophu.
Halkalı -Iziko leMarmaray yeeGebze
Inendlela ewona mde kakhulu kunazo zonke e-Istanbul Halkalı -Kukho indawo yokumisa i-42 iyonke kumgca we-metro weGebze. Kwezi ndawo zokuma, i14 ikwicala laseYurophu, ngelixa i-28 eseleyo ikwicala lama-Anatoli. Izikhululo zeMarmaray zezi zilandelayo:
I-Interactive Istanbul Metro Map
Imephu kaMarmaray RayHaber Tube
Imephu yeeNdawo zoLoliwe ze-Istanbul (pdf)
Imali encinci yale khosi iya kusebenza kwi-13.03.2019
Ixabiso elipheleleyo leTikiti: 2,60 TL
Ixabiso leTikiti elishiyiweyo: I-1,25 TL / 1,85 TL
Intlawulo epheleleyo yeKhosi
Ixabiso elipheleleyo leTikiti: 5,70 TL
Ixabiso leTikiti elishiyiweyo: I-2,75 TL / 4,0 TL